HALATRA « PANNEAUX SOLAIRES » AMBOHIMANARINA : Lehilahy miisa 2 nosamborin’ny Polisy
Lehilahy miisa 02 no voasambotry ny polisy avy ao amin’ny boriborintany fahaenina ny alin’ny alakamisy hifoha zoma faha 22 marsa 2019 teny amin’ny faritra « Rocade » Ambohimanarina noho ny halatra « panneaux solaires » mipetaka amin’ny andrin-jiro. 24 mars 2019
Vokatry ny fiaraha-miasa amin’ny vaomieran’ny fandriam-pahalemana eny amin’ny faritra Ambohimanarina no nahafahana nisambotra ireto olon-dratsy ireto. Tokony ho tamin’ny 02 ora maraina no naharay antso avy amin’izy ireo ny polisy mikasika ny fisiana lehilahy vitsivitsy mihaodihaody manodidina ny andrin-jiro iray mandeha amin’ny herin’ny masoandro eny amin’ny « rocade ».
Tonga teny ifotony ny polisy ka tra-tehaka teo am-panaovana ny asa ratsiny ny lehilahy iray raha tafatsoaka ny ambiny. Baramina miisa 02 ihany koa no tra-tehaka teny amin’ny toerana nisamborana an’ ilay lehilahy. Nentina natao fanadihadiana avy hatrany arak’izany ilay voasambotra, ka ity farany no nanoro ny toerana fonenan’ilay namany. Nosamborina tao an-tranony izy ny zoma tokony ho tamin’ny 06 ora maraina. Nosavaina ny tranony ka tamin’izany no nahitana singa maro izay hita eny amin’ireny andrin-jiro ireny.
Mangataka fiaraha-miasa akaiky amin’ny mponina ny amin’ny fanomezana loharanom-baovao hatrany ny eo anivon’ny Polisy eto an-drenivohitra, ho fanamorana ny fisamborana ireo olon-dratsy.